Kwidziridzo: Zvita 20, 2019 (03:50 PM ET): Takagadziridza rondedzero iyi nemamwe akawanda maGoogle app ayo anogona kutora mukana weakavakirwa-mune rima mode.
Chinyorwa chekutanga: A system-wide rima theme arikuuya na Android 10, asi iyi vhezheni itsva yeAmerican haizowanikwe nemunhu wese kwenguva yakati rebei. Kuti tiregedze, Google yange ichiburitsa kunze madema madema kune ayo ese maapplication application, kusanganisira Google Calendar, Google Fit, YouTube, Uye zvakawanda.
Ngatitarisei kuti ndezvipi zvinoshandiswa neGoogle zviri pamutemo dark mode uye maitiro ekuvagonesa.
Google yakasviba mode
Chengeta Zvinyorwa (dandemutande)
Mupepeti wekunyora: Tichagadzirisa iyi runyorwa seGoogle inogadziridza mamwe maapurogiramu ane rima mode rutsigiro.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Calculator
Nekusavimbika, iyo Calculator yeGoogle app inoshandura dingindira rayo zvichienderana nekuti Battery Saver inogoneswa. Nekudaro, pane nzira iri nyore yekuigadzira saka iyo Calculator app inoratidza yakasviba nzira nguva dzese:
Vhura iyo Calculator software.
Tinya matsi matatu kumusoro kurudyi.
pombi Sarudza dingindira.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Khalenda
Sezvakaita neApp Calculator, iyo Google Calendar app inochinja misoro zvichienderana nekuti Battery Saver inogoneswa. Izvo zvakati, iwe unogona kuenda mukati megadziriro yeApp uye kugonesa yakasviba maitiro. Heano maitiro:
Vhura iyo Khalenda app.
Tora iyo hamburger icon kumusoro kuruboshwe.
pombi Settings pedyo nepasi.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Chrome
The Google Chrome nhare mbozha inogona kuchinja misoro ingave Bhatiri Saver inogoneswa, kana unogona kuichinja pameso. Heano maitiro:
Vhura iyo Google Chrome app.
Tora iyo katatu dots kumusoro kumusoro.
pasi Basics, tap madingindira.
sarudza Dark or System kusina.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Clock
Related: 10 akanakisa mawebhusaiti madhijitari uye madhijitari wachi evhavhisi eApp
Google Clock inokwanisa kugonesa chimiro chakasviba nekukasira, isina sarudzo yemusoro wechirevo. Nekudaro, pane nzira yekugonesa yakanyanya kusviba Google nzira yakasviba yeiyo appsaver screen:
Vhura iyo Clock app.
Swipe pasi kusvikira iwe wasvika kune Screen saver chikamu.
pombi Night mode.
Maitiro ekugonesa sei Google rima mode muGoogle Cont Cont
By default, Google Contacts inogonesa theme yerima kana iwe uchigonesa Bhatiri Saver. Nekudaro, iwe unogona kuchinja manamira pane yakasviba mode:
Vhura iyo Google Contacts app.
Mu kuratidza chikamu, tap Sarudza dingindira.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muDhijit Wellbeing
Zvitende kana kwete, Google Digital Wellbeing app inouyawo neiyo yakasviba mode. Kuti ugone kuigonesa, iwe unongofanirwa kuchinja chengetera yako dhizaiti kune yakasviba modhi uye Dhijitari Wellbeing ichatevera kukodzera.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Dhivha
Kufanana nezvimwe zvishandiso zveGoogle, Google Drive inogona kushandura misoro kana Bhatiri Saver ikabvumidzwa, kana iwe unogona kuiisa pamunhu yakasviba theme. Heano maitiro:
Vhura iyo Google Drive app.
Mu dingindira chikamu, tap Sarudza dingindira.
sarudza Dark or Yakagadzwa neBattery Saver.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Duo
se Google Drive, vashandisi vanogona kana kuseta Google DuoYakasviba nzira yekukonzeresa kana Battery Saver ikabvumidzwa, kana ivo vanokwanisa kuiisa nemaoko. Heano maitiro:
Vhura iyo Google Duo app.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muFiles neGoogle
Vhura maFaera neGoogle app.
Mu Zvimwe Zvirongwa chikamu pazasi, tap Musoro werima.
Matanho anongoshanda kumaFaera neGoogle app anowanikwa mu Play Store.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Discover feed
Iyo 'yechokwadi nhema' dema nzira inochengetedza yakawanda bhatiri pane yakasviba grey? Ehe, asiwo kwete
Nechokunopera kwaNovember gore rapfuura, Google pakupedzisira yakabvuma kuti nzira dema, iko, dzakanaka kune yako OLED smartphone bhatiri. Kubva ipapo, kambani yakaparadzira rima misoro kune dzakawanda dzayo ...
Kugara kuruboshwe-kazhinji chikamu chemusha chidzitiro, iyo Yekudha yekudya ikozvino inoratidza yakakodzera nzira yerima. Nehurombo, hapana sarudzo yekushandisa iyo maneru - iyo yerima theme inongozvirova kana iwe uine yakasviba Wallpaper kana mamwe mamiriro ekuratidzira.
Heino tarisiro yekuti Google ichakurega iwe uchinjira pakati penzira dzakajeka uye dzakasviba mune remangwana rekuvandudza.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Fit
Sezvazvino shanduro 2.16.22, Google Fit ine chimiro chakasviba. Neiyo update. iwe unogona ikozvino kusarudza iyo yemusoro wenyaya yeApp kupusa, kusviba, kana kushandura otomatiki nebheta saver.
Vhura Google Fit.
pombi Profile pane yakadzika yekutsvaira bara.
Tora iyo gear icon kumusoro kuruboshwe.
Shambaira padanho reTema pazasi.
Sarudza pakati chiedza, Dark, uye System kusina.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Gallery Enda
Mifananidzo yeGoogle isingaremi - Garari Enda - zvakare ine yakapusa yekushandisa rima theme yekubatidza:
Vhura Google Gallery Go.
Toggle Musoro werima pamusoro.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGmail
The Gmail app inogona kuteverawo kupindirana neyakagadzirirwa kifaa chako nerima / rakareruka theme, kana vashandisi vanogona kuseta iro rima theme nemaoko. Nehurombo, inongowanikwa chete paApple 10 panguva yekupinda.
Toggle Dark or System kusina.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Chengetedza manotsi
Kusiyana nemamwe maGoogle mamwe maapp, iyo yerima mode mukati Google Chengetedza Zvinyorwa haina default yeBattery Saver mode. Pane kudaro, pane nyore kugegedza kuti ushandise rima mode kana kudzima.
Vhura Google Chengetedza manotsi.
Toggle Gonesa Tema yeRima pamusoro.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Chengetedza manotsi kuwebhu
Pamusoro peiyo mobile app, iyo webhu vhezheni yeRuzivo rweManotsi inopawo rima mode. Kana iwe usati wazviona, usazvidya moyo - dema nzira parizvino inobuda kune wese. Kana iwe uchifunga kuti une dema maitiro, heino maitiro ekugonesa:
Enda kune Google Keep Notes webhusaiti.
Baya gear icon kumusoro kumusoro.
Mune iyo inodonhedza menyu, tinya Gonesa nzira yeRima.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Mepu
Google Maps haina kupa app-yakajeka yerima dingindira. Pane kudaro, iyo app inosvibisa mepu panguva yekufamba. Iyo pseudo-rima mode inosveta otomatiki maererano nenguva yezuva, asi pane nzira yekuzvigadzirira iyo:
Vhura Google Mepu.
Gurudzira pasi uye tora pasi Navigation masaisai.
Bhura pasi kusvika kune Mepu kuratidza chikamu.
In Chikamu chemuvara, tap Husiku.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Messages
Google Messages ' theme yerima haivimbi neBattery Saver. Kunyangwe zvirinani, zviri nyore kuseka nzira yakasviba mukati meapp:
Vhura maGoogle Meseji.
pombi Gonesa maitiro erima.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle News
10 akanakisa nhau mapurogiramu for Android! (Zvakavandudzwa 2019)
Internet yakachinja maitiro atinoona nhau. Panzvimbo pekuve nemugadziri weTV kana mupepeti wedhizai kuti atarise zvinhu zvakakoshera kwatiri uye atenge muchigadzirwa chavo, isu tiri…
By default, Google News inotenderera pane yakasviba nzira kamwe Battery Saver inorovera mukati. Zvisinei, iwe unogona kuva nerima dingindira otomatiki otendeuka usiku uye neBattery Saver, usatombovheneka, kana kugara uchigara.
Vhura Google News.
Tinya yako icon icon kurudyi kumusoro.
Mu General chikamu, tap Musoro werima.
sarudza nguva dzose, Automatically, Bhatiri saver chete, kana Kwete.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Pay
Google Pay shanduro 2.96.264233179 inoratidzira otomatiki yerima mode. Zvine kusuwa, hapana nzira yekuvhura kana kudzima nzira yeGoogle Pay yerima pamawoko, saka iwe uchafanirwa kuvimba nehurongwa hweAmerican 10's wide wide mode kana bhatiri saver kukuitira iwe.
Ita shuwa kuti urikumhanyisa yazvino vhezheni yeGoogle Pay, shanduro 2.96.264233179.
Kuongorora kuti nderipi shanduro yeGoogle Pay yauri, vhura iyo Google Pay app, tora bhatani remenyu menyu kuruboshwe rwe skrini, tinya About, wobva watarisa nhamba yekushandura iri pamusoro.
Kana usiri paiyi vhezheni, musoro kuGoogle Play Store kuti uone kana paine update. Kana chigadzikiso chiripo, dhawunirodha.
Kana chigadzikiso chisipo, unogona kutora vhezheni yazvino kubva APK Mirror.
Paunenge uchingomhanya neyazvino vhezheni yeGoogle Pay, vhura iyo app. Kana bhatiri saver kana yako system-wide rima theme ikavhurwa, Google Pay inoratidza rima theme. Kana iwe usina kana imwe yeaya maficha akamiswa, Google Pay inoratidza yakajairika mwenje wenyaya theme.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Foni
Vhura Google Runhare.
pombi Display sarudzo.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Photos
Google Photos 'yakasviba mode inongowanikwa chete kana uine system-wide rima mode inogoneswa uye hapana nzira yekubatidza kana kuvhara kunze kweiyo. Sezvineiwo, izvi hazvisi zvega zvega zvega ku10. Isu takakwanisa kuwana kusevenza uku kuchishanda paApp 9 zvakare.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Play Mabhuku
Kusiyana neGoogle Play Store, Mabhuku eGoogle Play inosanganisira nzira yakasviba. Kunyangwe zvirinani, zviri nyore kuwana:
Vhura Google Play Mabhuku.
pasi General, chengeta Musoro werima.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Play Mitambo
Related: 15 yakanakisa mitambo yeAustralia ye2019!
Kunge Google Play Mabhuku, Mitambo yeGoogle Play inosanganisira rima mode, uye zvakare zvakare nyore kuita:
Vhura Google Play Mitambo.
Toggle Shandisa rima theme pamusoro.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Playground
Izvi zvishoma zvishoma zvisinganzwisisike sezvo pasina kubatanidza kuita kuti uite kana kudzima rima mamiriro. Nekusagadzikana, maitiro erima anogoneswa mu Playground. Isu tichafanira kumirira uye kuona kana Google ichikanda mune yakasviba mode yekudzokorora mune ramangwana rekuvandudza.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Podcasts
Nehurombo, yenguva iripo, yakasviba nzira yeGoogle Podcasts inongowanikwa chete kana iwe unayo Google app beta shanduro 10.89 kana kuti gare gare kuisirwa pamudziyo unomhanya Android 10. Uye sePamhepo yekutamba, hapana chekuchinja chekugonesa / kudzima rima mode muPodcasts. Kuti ugone kugonesa chimiro chakasviba muapp, unofanirwa kuve nacho icho chinogonesa system-wide.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muRekodha
Zvitsva zveGoogle Recorder app inouya ine rima mode futi. Heano maitiro ekuigonesa:
Mu General chikamu, tap Sarudza dingindira.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muNyoka
Zvinoshamisa kuti, kunyange Google Yakakundwa Kugadziriswa kwemifananidzo app inoratidzira yakasviba mode.
Mu Kuonekwa chikamu, kuchinja Musoro werima pamusoro.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muSauti Amplifier
Kufanana nezvimwe zvishandiso, chishandiso cheGoogle chekuwanika chishandiso - Ruzha Amplifier - ine rima mode, asi inogona kungobvumidzwa kana kuremadzwa neyechirongwa dingindira. Inoshanda pane zvese zviri zviviri Android 9 uye Android 10.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Tasks
Mabasa eGoogle iri rakapusa basa rekutarisira app neyakareruka nzira yekugonesa rima. Vashandisi vanogona kuisa mamiriro acho pamawoko kana kurega Bhatiri Saver kuti isarudze iyo iyo iyo app iyo inofanira kuishandisa.
Vhura Mabasa eGoogle.
Tora iyo katatu dots pazasi kurudyi.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muGoogle Voice
Google Voice haina kusiirwa kune yakasviba nzira pati. Iwe unogona ikozvino man ngesandla kugonesa yakavakirwa-mune rima modhi mune mashoma mashoma mashoma kana kurega iyo system theme ichikuitira iwe basa:
Vhura Google Voice.
Mu Display sarudzo chikamu, tap dingindira.
sarudza Dark or Kubva pane masystems.
Maitiro ekugonesa sei maitiro erima muYouTube
Tora yako Google mbiri icon kumusoro kumusoro.
Sonos matipi uye manomano: Wana zvakanyanya kubva kune yako akawanda-makamuri mutauri system